A Methapred (အေ မီသာပရတ်) - Hello Sayarwon
A Methapred (အေ မီသာပရတ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » A Methapred (အေ မီသာပရတ်)
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: A Methapred (အေ မီသာပရတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အေ မီသာပရတ် ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ-
အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနီခြင်း၊ အဖိမ့်ထခြင်း၊ အူမကြီးအနာရောင်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်မှုများ၊ ဂလင်းပြဿနာတွေကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမှာ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ သုံးတဲ့ စတီးရွိုက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးရုံကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအကုန် လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သေချာနားမလည်တဲ့အချက်တွေကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
အေ မီသာပရတ် ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ အေ မီသာပရတ် ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အေ မီသာပရတ် ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
အေ မီသာပရတ် ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
အေ မီသာပရတ် ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
မသောက်သုံးခင်မှာ သင့်ဆရာဝန်ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြောပြပါ။
Methylprednisolone ဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်ဆိုရင်
အသည်းခြောက်ခြင်း သို့ အခြားသောအသည်းရောဂါများ
တီဘီရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း သို့ ဖြစ်နေခြင်း
တက်ခြင်း၊ မကြာသေးမီက ဦးခေါင်းထိခိုက်ဖုူးခြင်း
အစာအိမ်အနာ၊ အူမကြီးရောင်ရမ်းနာ၊ အူမကြီးအတွင်းနာကျင်မှုခံစာရတဲ့ရောဂါ သို့ မကြာသေးမီက အူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ဖူးခြင်း
စိတ်ကျခြင်း သို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာခြင်း
အင်ဆူလင်သို့ ဆီးချိုအတွက်သောက်ဆေး၊ အက်စပရင်ဆေးကို နေ့စဉ်ပမာဏအများကြီး မှီဝဲနေခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေခြင်းသို့ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားခြင်း
သင့်ကလေးအတွက် အသုံးမပြုခင်မှာ စိတ်ချရမှုရှိမရှိ သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်
C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဗိုက်အောင့်ခြင်းမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းသဖွယ်အမြင်အာရုံဖြစ်နေခြင်း ၊ မျက်စိနြာခ်င်း၊ အလင်းစက်ကွင်းများမြင်ရခြင်း
အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်ချည်းတက်ခြင်း
ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲခြင်း၊ အတွေးအခေါ်အမူအကျင့်များ ပြောင်းလဲခြင်း
သွေးသို့အနက်ရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း၊ ကော်ဖီစေ့ရောင်ကဲ့သို့သော အန်ဖတ်များ
ပိုတက်ဆီယမ်နည်းခြင်းကြောင့် ခြေထောက်များမအီမသာဖြစ်ခင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ ထုံခြင်းသို့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြ်င်း သို့ ခွေယိုင်ခြင်း
အေ မီသာပရတ် ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
Rotavirus Vaccine, Live;
ဘယ်ဆေးတွေက A Methapred (အေ မီသာပရတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က A Methapred (အေ မီသာပရတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
အေ မီသာပရတ် က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက A Methapred (အေ မီသာပရတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အေ မီသာပရတ် ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ }
ကူရှင်းရောဂါစု ( အဒရီနယ်ဂလင်းပြဿနာ)
ကြွက်သားအားနည်းခြင်း ( ပြင်းပြင်းထန်ထန်)
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ ( ဥပမာ အူမကြီးအတွင်းနာကျင်မှုခံစားရခြင်း၊ အနာများ၊ အူမကြီးရောင်ရမ်းနာ)
ကူးစက်ပိုးများ ( ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ မှို၊ ကပ်ပါးပိုး၊ )
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးထိုးရမယ့်ပမာဏကို ဆရာဝန်က သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြိး ဘယ်လောက်အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏကတော့ 0.11 to 1.6 mg/kg/day တစ်နေ့၃ကြိမ်၄ကြိမ်ခွဲပြိး (3.2 to 48 mg/m2bsa/day).
A Methapred (အေ မီသာပရတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အေ မီသာပရတ် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရည်ပုံစံ : 125mg/2 ml; 40 mg/ml
အေ မီသာပရတ် ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Methapred. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8952/A-methapred®-injection/details. Accessed September 15, 2016.
Methapred. https://www.drugs.com/cdi/A-methapred®-solution.html. Accessed September 15, 2016.
Methapred. http://www.rxlist.com/A-methapred®-drug.htm. Accessed September 15, 2016.
Methapred. https://www.drugs.com/mtm/A-methapred®-injection.html. Accessed September 15, 2016.
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင်